Tetikasa Lahatsary Mampahafantatra Ny Fiainana Sy Ireo Ady Atrehan’ireo “Papous” Tandrefana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 27 Marsa 2015 3:45 GMT
Vakio amin'ny teny Nederlands, Swahili, Español, Ελληνικά, English
Sary avy tamin'ny Feon'ny Papou (Papuan Voices), nahazoana alalana ny fampiasàna azy.
Papuan Voices dia fandraisana andraikitra fisoloana vava amin'ny alàlan'ny famokarana lahatsary, izay manome fahafahana ireo Papous Tandrefana mpikatroka mafàna fo mba hamokatra horonantsary fohy hitantaràna ireo tantarany ary hilazàna ireo ady atrehan'izy ireo isan'andro.
Mahàlana no mba mitatitra momba ny fiainana any Papoazia Andrefana, faritany iray ao Indonezia, ireo media lehibe. Raha mba mitodika any amin'io faritra io ireo mpitati-baovao, dia miompana kokoa amin'ny fifandirana ara-politika eo anivon'ny governemanta Indoneziana sy ny hetsika ho an'ny fahaleovantenan'i Papoazia Andrefana, matetika. Manoro ireo mpamaky ireo endrika hafa isehoan'ny kolontsaina sy tantaran'i Papoazia ny Papuan Voices:
Tsy natao manodidina ny ady ara-politika Papoazia ho an'ny fahaleovantenany ihany ireto tantara ireto; tsy tantaranà fifandirana araka ny ahely matetika ireo. Fa kosa, tantara ankoatra ny fifandirana ireo: ireo ady ho an'ny fampianarana, ny fiarahamonina, ny fitoviana sy ny fahamendrehana..
Ny Papuan Voices dia fifandrimbonana eo amin'ny EngageMedia sy ny Fahamarinana, Fandriampahalemana, ary ny “Intégrité” an'ny Famoronana . Miara-miasa amin'ireo fikambanana eo an-toerana any Jayapura sy Merauke any Papoazia Andrefana ilay tetikasa, izay nanatrehan'ireo mpikatroka mafana fo tany an-toerana atrikasa amin'ny fampitam-baovao, ary nianarany nitantara tamin'ny alalan'ny lahantsary ny tantara sarotra momba ny Papoazia Andrefana. Lahatsary roa miaraka amin'ireo mpanatontosa horonantsary maro teo an-toerana, ary tantara manokana momba ny sosialy, kolontsaina, ary ny raharaha politika any Papoazia Andrefana no vokatra azo.
Manantena ny mpikarakara ny tetikasa fa “hanome aingam-panahy ho an'ny hafa ireo tantara ireo mba hianatra sy handray andraikitra, amin'izay ho entina eny anoloana ireo feon'ny Papoazia Andrefana.”
Efa nalefa nojerena tany amin'ny faritra sasany tao Indonezia ireo lahatsary. Ny Mutiara Dalam Noken (Perla any Noken) no iray amin'ireo horonantsary malaza, izay manambara ny tantaran'i Dr. Mia, “vehivavy Papoana iray izay nanokana ny fiainany mitsabo ireo marary ary manome tànana manampy ireo mahantra any amin'ireo faritra tena saro-dàlana sy lavitra any Papoazia Andrefana .”
Dikasary avy tamin'ny “Papuan Voices.”
Miompana amin'ny trano nentin-drazana Honai ny lahatsary iray hafa malaza be, ivon'ny fiainam-piarahamonina any amin'ny faritra avon'ny afovoan-tany, manamboatra trano bongo mba hitahirizana ilay lova ara-kolotsaina.
Nanampy ny famokarana ny horonantsarin'ny Papuan Voices mampiseho ny mahazo ireo vehivavy mpivarotra, i Patricio Wetipo, mpamokatra horonantsary. Tao amin'ny fijoroana vavolombelona, nitaraina i Wetipo fa tsy dia taterina araka ny tokony ho izy ny herisetra atao amin'ireo vehivavy.
Ny herisetra politika sy miaramila matetika no tena asehon'ireo media. Ary tsy misy mijery ny herisetra mihatra amin'ireo vehivavy na iray aza.
Natao hanehoana ireo faharatsian'ny fiainan'ireo vehivavy any Papoazia ilay lahatsarin'i Wetipo:
Tiako haseho amin'ny olona maneran-tany ireo fiainan'ireo vehivavy Papoana. Miasa mafy tokoa izy ireo, nefa tsy mahazo fanampiana avy amin'ireo mpikambana amin'ny fianakaviany mihitsy. Tsy mba manampy azy ireo mitaona entana any an-tsena akory ny vadiny. Manantena izahay fa hahita ireto horonantsary ireto ny olona ary hahazo aingam-panahy mba hitondra fiovàna eo amin'ny fiainany.
Lahatsary hafa indray mitondra fanadihadiana momba ny kolontsaina Wamena, miompana manokana amin'ny maha zava-dehibe tokoa sy manan-daja ireo kisoa ao amin'ny fiarahamonina eo an-toerana.
Avy amin'ny teny hoe ‘Wam’ izay midika hoe kisoa kely, sy hoe ‘Ena’ izay midika hoe alaina namana akaiky ny anarana hoe Wamena. Ahitàna endrika kisoa daholo ireo fombafomba atao rehetra, ary refesina amin'ny isan'ny kisoa ananany ny harenan'ireo fianakaviana. Endriky ny fiadanana eo anivon'ny foko any amin'ny toerana avon'ny firenena ihany koa ny kisoa. Noho izany, mety hampisy fitotonganana ara-toekarena goavana tokoa eo amin'ireo vahoakan'i Wamena ny aretin-kisoa mahatonga fahafatesana, .
Asehon'ilay lahatsary ny fifandraisana akaiky tokoa eo amin'ireo kisoan'ny fiarahamonina sy olona, ary ny dona sosialy nateraky ny aretina nandringana kisoa maro:
Manampy ireo olona hahatakatra tsara kokoa ny fanamby atrehan'ireo Papoana any Indonezia ny Papuan Voices. Fampahatsiahivana mahery vaika ihany koa io, hoe tokony hanadihady sy hizara bebe kokoa ireo tantaran'ireo vahoaka Papoana tsotra isika, ankoatra ny fanehoana ireo fangatahana ara-politikany hisian'ny fahamarinana sy ny fitoviana.